101 Dog Care Tips: For Beginners - ခွေးလေးတွေအကြောင်းသိကောင်းစရာ
101 Dog Care Tips: For Beginners0309
The KaungHtet January 11, 2022 4:23 am January 11, 2022
ယခုလိုခက်ခဲပြီး အိမ်မှာအများဆုံးနေရတဲ့ Stay-Home ကာလမျိုးမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစု နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ချိန်ပြီးရင် အိမ်မွးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူထားတဲ့ သူများအတွက်ဆိုရင် သူတို့လေး‌တွေနဲ့ အကုန်ဆုံးရတဲ့အချိန်တွေကပိုများကြတယ်မဟုတ်လား?
ဒါ‌ကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများထဲမှ ဝုဝုလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ခွေးလေးတွေကိုမွေးမြူကြတော့မယ်ဆိုရင် လိုအပ်မယ့်အခြေခံအချက်လေးတစ်ချို့ကို အားလုံးနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
 Prepare the Place – နေစရာပြင်ဆင်ပါ 🐶
ဝုဝုတို့ကိုမွေးတို့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်က နေရာထိုင်ခင်းပါ။ ယခုလိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဆို မိမိအိမ်‌နေရာအကျယ်အဝန်းအဓိကမကျပါဘူးနော်။ သူတို့လေးတွေအတွက်သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အိမ်လို့ခံစားစေရမယ့်‌ အိပ်ယာ (သို့မဟုတ်) Hide-out နေရာလေးတစ်ခုတော့လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်သတိထားရမယ့်အချက်က ဖေဖေ၊ မေမေတွေနဲ့ တခါမှမနေဖူးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မယ့် လျှပ်စစ်မီးပလက်တွေ၊ ကိုက်လွယ်၊ ကွဲလွယ်တဲ့အရာတွေ၊ အမှိုက်ပုံးတွေ၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပြတင်းပေါက်တံခါးတွေကို သေချာစီစစ်ထားသင့်ပါတယ်။
Shop App MM ရဲ့ Shop Mart တွင် ဝုဝုတို့အတွက်လိုအပ်မယ့် Accessories မျိုးစုံကို သက်သာသောလျှော့စျေးနှုန်းများဖြင့် >>> ဒီနေရာတွင် <<< ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်။
“Shop Mart ကဝယ်ထာတဲ့ သားသားရဲ့ အိပ်ယာလေး”
 သူတို့အကြောင်းလေးတွေကိုလေ့လာပါ – Know Their Personalities 🐶
မိမိမွေးမြူမယ့် ဝုဝုတွေရဲ့ အခြေခံစိတ်နေသဘောထားလေးတွေကိုလည်း ကြိုတင်သိထားဖို့လိုမယ်နော်။
🐶 ဉာဏ်ကြီးရှင် Labrador နဲ့ Golden Retriever တွေလား?
🐶 တည်ငြိမ်သူကြီး French Bulldog လား?
🐶 သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ မိစွာတေး Chihuahua လား?
🐶 အဆော့သန်တဲ့ Pomeranian လေးလား?
🐶 အအေးကြိုက်တဲ့ Husky လား?
🐶 ယုံကြည်မှုအပြည့်မဲ့ အထာကျကျနေတတ်တဲ့ Dobermann လား? …
စတဲ့ သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို ကြိုတင်လေ့လာထားမှလည်း ဖေဖေ၊ မေမေတို့ရဲ့ personality နဲ့ကိုက်ညီမယ့် ဝုဝုလေးတွေကို ‌ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
 Food – အစားအစာ 🐶
ဝုဝုတို့နှစ်သက်တဲ့ အစားအစာတွေအပြင် ဝုဝုတို့ရဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးစွမ်းမယ့် Treat တွေလည်း ကျွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။
Shop App MM ရဲ့ Shop Mart မှာ ဝုဝုများအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်မယ့် အာဟာရနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်တင်းပေးမယ့် Food နှင့် Treat များကို ချိုသောလျှော့စျေးနှုန်းများဖြင့် >>> ဒီနေရာတွင် <<< တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
“Shop Mart မှာပဲရှိတဲ့ သားသားအကြိုက်ဆုံး မုန့်မုန့်”
 Health – ကျန်းမာရေး 🐶
ဝုဝုတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အမြဲဂရုစိုက်စောင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဝုဝုတွေကို (၁) နှစ် (၁) ကြိမ် တိရစ္ဆာန်ဆရာန်ဝန်တွေနဲ့ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆးပေးဖို့လိုတာမို့ နီးစပ်ရာတိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းတွေလည်း ကြိုတင်စုံစမ်းထားဖို့လိုမယ်နော်။
“သူတို့လေးတွေနေမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင် ကိုယ်တွေမှာ စိတ်ပူရတာလည်းအမော … သူတို့လေးတွေ မျက်စိရှေ့တင်ကျန်းမာကြီးထွားလာတဲ့အချိန်တွေကို မြင်ရပြန်တော့လည်း အမောတွေပြေရပြန်လေရောမဟုတ်လား…”
 Prepare to Teach – လေ့ကျင့်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်ပါ 🐶
တိရစ္ဆာန်ချစ်သူတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှလုံးသားအနူးညံ့ဆုံးနဲ့ လူသားတွေလို့ပြောစမှတ်ပြုကြပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ တာဝန်ယူမှုပြည့်ဝတဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ပါ ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးပါရစေ။ ဝုဝုလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကျန်း‌မာစေဖို့သာမက ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထူးချွန်ဖို့အတွက်ပါ သင့်တော်သော ကစားစရာများဖြင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ခိုင်မာသော relationship ကိုလည်းတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Shop App MM ရဲ့ Shop Mart မှာ ဝုဝုများကို ပျော်ရွှင်စေမယ့် ကစားစရာများကို တစ်နေရာတည်းမှာတင်စုံလင်စွာ အထူးလျှော့စျေးနှုန်းများဖြင့် >>> ဒီနေရာတွင် <<< ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်။
“သားသားချစ်တဲ့ ရုပ်ရုပ်.. Shop Mart က‌‌နေ မေမေဝယ်ပေးထားတာ”
 Prepare Yourself 🐶
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။
သက်ရှိအရာတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထည့်သွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေသာမက “Patient, Perseverance, Passion” ဆိုတဲ့ စိတ်ရှည်မှု၊ ဇွဲသန်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုတို့များစွာလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့မှသာလျှင် မိမိချစ်ရတဲ့ ဝုဝုလေးတွေကို ကြာရှည်ကောင်းမွန်စွာပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တိချစ်သူများအားလုံး မိမိချစ်ရတဲ့ သားသားမီးမီးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအမှတ်တရတွေ အများကြီးဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ Shop MM မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Shop App MM ရဲ့ Shop Mart တွင် မိမိချစ်တဲ့အိမ်မွးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက် လိုအပ်မဲ့ အရာအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာတင် စျေးနှုန်းများဖြင့် ‌ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီနော်။
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုပါက >>> ဒီစာသားကိုနှိပ်ပါ <<<
Written by The KaungHtet
Previous ArticleNew Year, New Recipes – Burmese CuisinesNext ArticleSustainability & Climate Change – ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း